Midowga Musharaxiinta oo war adag ka soo saaray doorashooyinka... | Universal Somali TV
Midowga Musharaxiinta oo war adag ka soo saaray doorashooyinka dalka
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa war kulul ka soo saaray shirkii maalmahaanba uga socday Magaalada Muqdisho, ee ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Waxay sheegeen inaanay marnaba raali ka ahayn, oo aynaan aqbalayn, qaybna ka noqon doonin boobka socda ee sida ay sheegeen lagu burburinayo dowladnimada.
Warka oo qodobo dhowra lagu xusay ayaa lagu sheegay 1- In laga tegay odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa in ay soo xulaan ergooyinka dooranaya xildhibaanada.
2- In aysan jirin ergo la xulay, la diiwaangeliyay, la tababaray, guddiga doorashooyinka ee heer Federaalna (FIET) ay hubiyeen.
3- In ergooyin laga dhigay shaqaalihii rayidka ahaa, ciidanka dowladda iyo dad aan mararka qaar ku hayb ahayn qabaa’ilka kursiga lahaa.
4- In loo diiday diiwaangelinta tartanka kursiga xildhibaanno kuraasta horey ugu fadhiyay iyo kuwo kale oo xaq u lahaa, halka la diiwaangeliyay xubno aan soo buuxinin shuruudihii diiwaangelinta.
5- In ay luntay madaxbannaanidii iyo dhexdhexaadnimadii guddiyada doorashada heer dowlad goboleed, kuwaasoo toos uga amar qaadanaya Madaxweynaha dowlad goboleedka, halka guddiga doorashada ee heer federaal ka amar qaataan Madaxda Federaalka.
6- In guddiyada labada heer aysan kala amar qaadanaynin, Guddiga Xallinta Khilaafaadka uu gabay hawshii loo xilsaaray, isagoo diiday qabashada cabashooyinka, kuwii loo gudbiyayna aanan u cadaalad falin.
7- In aysan jirin korjoogtayn iyo tebin toos ah ee warbaahineed si loo hubiyo in si daahfuran u dhaco tartanku.
Warka ayaa waxa kaloo lagu yiri "Goluhu wuxuu watadashi la yeelanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada, si loo helo xal qaran oo dalka looga samatabixiyo halista ku soo fool leh xasilloonida, dowladnimada iyo wadajirka ummadda."
Kan-xigaDad isku qoys ahaa oo ku dhintay weer...
Kan-horeSuldaan Mahdi “Laba hadalba waa lag...
63,297,934 unique visits